तपाईलाई २०२० कस्तो रहन्छ हेर्नुहोस् राशिफल – News Dainik
news १३ पुष २०७६, आईतवार १३:०५ विविध प्रतिकृया दिनुहॊस
नयाँ वर्ष २०२० नजिकिए सँगै यो वर्ष कस्तो रहन्छ? भन्ने जिज्ञाशा आम सर्वसाधारणमा हुन्छ नै । अहिलेसम्मको समय जे-जस्तो तरिकाबाट विते पनि अब आउने वर्ष आफ्नो लागि राम्रो होस् र उन्नति प्रगति गर्न सकियोस् भन्ने चाहना सबैको हुन्छ । वितेको समयमा पनि यस्ता चाहना हुन्थे नै । विगतको अनुभव एवं भोगाईले पनि मान्छेले तितामिठा अनुभव संगालेको हुन्छ । अब आउने समयमा आफूले चाहेको जस्तो उपलब्धि तथा सफलता मिल्ला नमिल्ला ग्रहगोचरको साथ के कस्तो छ भन्ने बारेमा चिन्ता र खुल्दुली हुनु स्वभाविकै हो ।
ग्रहगोचर विपरित छन् भने पनि त्यसको निवारणको लागि के कस्तो उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ ? कस्ता सावधानी अपनआउनु पर्छ ? त्यस्तो उपाय के हुनसक्छ ? आदि उपायको बारेमा पनि धेरैलाई जान्ने चाहना हुन्छ ।
यसै सन्दर्भमा यिनै कुरालाई विचार पुर्याएर आउँदै गरेको नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा ज्योतिष क्षेत्रका कुशल प्रतिभाशाली चर्चित ज्योततिषी डबलगोल्ड मेडलिष्ट दीपक सुवेदीले बताउनु भएको राशिफल यहाँहरुको लागि प्रस्तुत् गरिएको छ । आशा छ हेरेर फाइदा उठाउनु हुनेछ ।
अघिल्लॊ गौतम बुद्ध रङ्गशाला निर्माणमा श्रमदान गर्दै प्रहरी
पछिल्लॊ कृषि विकास बैंकद्वारा ग्रिनहिल सिटी समाजलाई डस्टबिन हस्तान्तरण
काठमाडौँ । कोभिड- १९का कारण एक वर्षमा छ लाखभन्दा बढी नेपाली स्वदेश फर्किने एक अध्ययनले …